'घामपानी'मा मौलिक स्वाद - मनोरञ्जन - नेपाल
'घामपानी'मा मौलिक स्वाद
अन्तरजातीय प्रेमकथा भनिएको यस फिल्ममा आयातीत भन्नु केही छैन तर कथा पस्कने शैली खुकुलो छ ।
घामपानी प्रदर्शनको पूर्वसन्ध्यामा निर्देशक दीपेन्द्र लामाले बारम्बार दोहोर्‍याउने वाक्य थियो, ‘नेपालीपन मिसिएको फिल्ममा केही गल्ती भए पनि दर्शकले स्वीकार्छन् ।’ उनी अप्रत्यक्ष रूपमा भन्न खोज्दै थिए, घामपानीको कथा पूर्णत: मौलिक हो तर कमजोरी पनि उत्तिकै छ । नभन्दै रहेछ पनि त्यस्तै ।
अन्तरजातीय प्रेमकथा भनिएको यस फिल्ममा आयातीत भन्नु केही छैन तर कथा पस्कने शैली खुकुलो छ । खिचाइमा पनि उस्तै सम्झौता गरिएको छ । सम्पादनमा हेलचेक््रयाइँ । तैपनि, रसिलो र इमानदार ढंगले ग्रामीण भेगको जीवन र मनोविज्ञान उतारिएकाले घामपानी हेर्दा अपनत्व महसुस हुन्छ ।
डेढ दशकदेखि कलममार्फत नेपाली सिनेमाको चिरफार गरिरहेका लामाले यसको पटकथा पनि आफैँ लेखेका हुन् । यसअघि उनले नागबेलीको पटकथा लेखेका थिए भने निर्देशकका रूपमा यही ‘डेब्यु’ हो । गिनेचुनेका कलाकार दयाहाङ राई र केकी अधिकारीलाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाइन्छ । अर्का कलाकार अंकित खड्का नेपाली फिल्मवृत्तका लागि घामपानीको ‘गिफ्ट’ हुन् ।
तामाङ ठिटो फुर्वा (दयाहाङ) र बाहुनकी छोरी तारा (केकी) बालसखा हुन् । तारा काठमाडौँबाट पढेर गाउँ फर्किएपछि यो जोडीको प्रेम मौलाइरहेको छ । तर, जात नमिलेकाले लुकिछिपी प्रेम गर्नुपर्छ । सानो गाउँ, जति नै लुकाउन खोजे पनि के साध्य लाग्थ्यो र ? घरमा सुइँको पाइहाल्छन् । त्यसमाथि गाउँमा भर्खरै आएको असई कमल (अंकित)ले तारामाथि आँखा गाडेको छ । अब तारालाई भगाउनुको विकल्प छैन फुर्वासँग । तर, जातीय विभेदले जरा गाडेको समाजमा बाहुनकी छोरीलाई विहे गर्दा फुर्वाले कति सास्ती बेहोर्नुपर्ला ? घामपानी यही उतारचढावमा अडेको छ । ‘सस्पेन्स’ भन्नु करिब ‘शून्य’ छ फिल्ममा । त्यसैले यसको ‘क्लाइमेक्स’ नेपाली फिल्म आक्कलझुक्कल हेर्नेले पनि अड्कल गर्न सक्छ ।
घामपानीको सबभन्दा सशक्त पक्ष भनेकै कथाप्रतिको निर्देशकको इमानदारी र विश्वास हो । सलल बगेको र खासै ‘ट्वीस्ट’ नभएको कथा भन्न उनी खासै हतारिएका छैनन् । बरू, दर्शकलाई झिजो नहोस् भन्नका निमित्त सकेसम्म मीठा संवाद र दृश्यलाई सिर्जन खोजेका छन् । पात्र अनुकूलको वेशभूषा र बोलीचालीले गर्दा नाटकीयता महसुस हुन्न । एउटै गाउँमा मिलेर बसेका फरक जात तर प्रेम र विवाह आउँदा त्यही सम्बन्धमा आउने दरार हाम्रै परिवेश अनुरूप प्रतिविम्बित गरिएको छ । एउटै निधारमा रातो र सेतो टीका लगाएको दृश्यले जातीय समभाव महसुस गराउँछ ।
कथा मौलिक छ तर त्यसलाई रोचकता प्रदान गर्न लामाले पटकथामा जति मिहिनेत गर्नुपथ्र्यो, त्यसमा कन्जुस्याइँ गरेका छन् । फिल्ममा यस्ता कुनै दृश्य छैन, जसले दर्शकलाई चित खुवाओस् । असईको नियत र उसको बुबाको सच्चाइ पहिल्यै भेउ पाइन्छ । पुराना नेपाली फिल्ममा गुन्डाहरू विवाहको मण्डपमा भाँडभैलो मच्चाउन आइपुग्थे, घामपानीमा दुलाहाकै बूढी आइपुग्छिन्, त्यो पनि छोरी च्यापेर । तर, यसको भेदलाई बचाउन नसक्दा फिक्का र पुरातन लाग्छ । राँगाको मासु देख्दा ताराले बान्ता गरेको, फुर्वाको साथीको घरको ‘हनिमुन रुम’ वा फुर्वाले तारालाई भगाएपछि सहर नपुगुन्जेका दृश्य पूरापूर अनावश्यक लाग्छन् । पुलिसको चरित्र चित्रण ‘कमेडी’ पैदा गर्ने हेतुले गरिएको छ, सुरुआतबाटै ।
शैलेन्द्र डी कार्कीले खिचेका अधिकांश दृश्यमा ‘डेप्थ’ छैन । तर, होटल साहुनी, घाँस बोकेका महिला, गाउलेको हुलिया र आनीबानीबाट ग्रामीण परिवेशको आभास गराउँछ । मुख्य कलाकारले नै बोकेका कतिपय संवादको डबिङमा त्रुटि छ । जसले निर्देशकमा प्राविधिक ज्ञानको अभाव रहेको छनक पाइन्छ । तामाङ सेलो गीतले फिल्मको बहाब बिगारेको छ । न त त्यसको कोरियोग्राफीमा पर्याप्त सांस्कृतिकता झल्किएको छ । अर्को गीत ‘पन्छी...’ श्रुतिमधुर भए पनि कोरियोग्राफी झारातिराइ शैलीमा गरिएकाले पर्दामा हेर्दा फिक्का लाग्छ । ‘जात मिल्ने होइन, भात मिल्ने भए पुग्छ’ भन्ने संवाद फिल्मको पेटबोली हो ।
सारमा दयाहाङको भूमिका अघिल्ला फिल्मका भन्दा भिन्न छैन । तैपनि, यसपटक निर्देशक लामाले उनलाई ‘लाउड’ हुनबाट जोगाएका छन् । उनको पहिचान बनिसकेको ‘ह्युमर’लाई यसमा पनि निरन्तरता दिएका छन् । केकी पनि तुलनात्मक रूपमा स्वाभाविक लाग्छिन् । उनको बोल्ने शैली, हुलिया, हाउभाउ गाउँले युवतीकै जस्तो छ । दयाहाङ र केकीको दबदबाबीच पनि नयाँ अनुहार अंकित आफूलाई चिनाउन सफल छन् । रंगमञ्च पृष्ठभूमिका अंकित सम्भावना बोकेका अभिनेता हुन् भन्नेमा शंकै छैन ।
घामपानीबाट उनले सहायक होइन, मुख्य पात्रमै आफू काबिल रहेको प्रमाणित गरेका छन् । प्रकाश घिमिरे, पुष्कर गुरुङ, कविता आले, अरूणा कार्कीलगायतका कलाकार पनि त्यत्तिकै प्रभावकारी छन् ।
सुरुमा भनिएजस्तै अग्र्यानिक कथामा कमी–कमजोरी भए पनि पचाउन सक्ने क्षमता छ भने घामपानी हेर्नु उत्तम हुन्छ । रमाइलो त छ नै, सँगै फरक जाति र संस्कृतिप्रतिको सम्मान गर्नुपर्ने सन्देश ‘बोनस’ पाइन्छ । तर, मसलायुक्त अनि गम्भीर र कलात्मक फिल्मका पारखीको चित्त बुझाउन मुस्किल पर्छ निर्देशक लामालाई । यत्तिचाहिँ हो कि, घामपानीबाट आफूप्रति आशा राख्नुपर्ने प्रशस्त कारण छोडेका छन् उनले